Semalt Uchaza Izindlela Zokuvikela Iwebhusayithi Yakho Ye-WordPress From Hackers
I-Inthanethi inikeza insiza enkulu kubantu abaningi. Amabhizinisi amaningi athola inthanethiplatform ukuheha amaklayenti amaningi kusuka ezindaweni ezahlukene kuwebhu. Ezinye zalezi zindawo zifaka injini yokusesha isebenzisa i-Search EngineUkuthuthukisa (SEO) noma kumanethiwekhi omphakathi usebenzisa i-Social Media Marketing (SMM).
Ama-akhawunti we-WordPress cishe angu-24% kuwo wonke amawebhusayithi e-intanethi emhlabeni wonke. Bonaube nesiteji samahhala esiphezulu lapho wonke umuntu angasebenzisa futhi azuze. Ama-Plugins abo, umakhi we-DIY womsebenzi kanye nezinye izici zewebhu kwikhodi yabounikeze isiteleka esivulekile sabanini-zimabhizinisi abaningi kanye ne-blogger ukusetha amasayithi abo e-commerce. Noma kunjalo, abaduni bafika kulezi zingosi ngokufanayongendlela. Kukhona imizamo engaphezu kuka-94563 yokuzama ukushaya izingosi ze-WordPress njalo ngomzuzu. Lesi sibalo siza ngenxa yesikhulumi sabo esivulekile esibonisazonke izindlela. Ngenxa yalokho, i-WordPress ingabonisa isiteji esingavikelekile esingabaqashi abaningi abangayisebenzisa ukuze benze ezinye zezinto eziningi eziyingoziukuhlaselwa.
u-Andrew Dyhan, iMenenja Yokuphumelela Kwekhasimende Semalt ,ubheka amathiphu okudingayo ukuvikela iwebhusayithi yakho ye-WordPress ekuhlaselweni kokuhlaselwa.
Ukusebenzisa amaphasiwedi aphephile kubalulekile..Isivivinyo sokuqala se-hacker ngokuvamile sizamaamaphasiwedi abuthakathaka ngaphambi kokuqhubeka nokuxhaphazwa okuqinile. Iphasiwedi efana ne-12345 ayiyona iphasiwedi ephephile. Kwezinye izimo, ungasebenzisi umlawuliiphasiwedi ebizwa ngegama lomntanakho noma inkampani. Ungashiya ulwazi oluningi lwenkampani olusengozini, futhi lokhu kungenza yonke inthanethiukuphepha esimweni esonakele. Ngaphezu kwalokho, khuthaza amakhasimende akho ngokubaluleka kwalezi zinyathelo.
Ukuvuselela ama-plugin nesofthiwe ye-spyware
Ukugcina ikhompiyutha yakho kusesikhathini kungakusindisa kusuka kokunye ukuhlaselwa kwewebhu. NgaphakathiAmacala amaningi, abaqashi basebenzisa ukusetshenziswa kwezixhumanisi eziyingozi eziqhuba izikripthi kwisiphequluli sewebhu. Ngokwesibonelo, abaduni bangase basebenzise scripting cross site. Lokhuukuxhaphaza ukuhlaselwa kwiseva yewebhu ngokusebenzisa ukufaka imiyalo kuwo wonke amafomu okubhalisa noma ezinye izikhombisi zokufaka umbhalo. Ngenxa yalokho, kubalulekile ukubacabanga ngokubhaliwe njengoba idatha idlulela kuye nakwevava kwisiphequluli sewebhu lomsebenzisi. Enye indlela ingasebenzisa anti anti spy. Lezi iziama-software angabona amagciwane kanye ne-malware njengeTrojans. Iwebhusayithi yakho ingahlala iphephile.
Kuzo zonke izindlela ze-eCommerce, kunezindlela eziningi zokufinyelela isevaI-inthanethi isebenza ngendlela yokushintshanisa, lapho umsebenzisi ethumela khona futhi ethola imiyalo evela kusiphequluli. Ngokufanayo, abaduni basebenzisa leli thuba ukwenzaamawebhusayithi abo athumela futhi athola imiyalo etholakalayo ukufinyelela kuseva ngokungemthetho. Uma senza amawebusayithi, umsebenzisi kanye nokwaneliseka kwamakhasimende kuyintongokuvamile umgomo wethu wokuphela. Sihluleka ukucabangela ukuthi kungenzeka yini abaqashi nabanye abantu abanezinhloso ezimbi. Eminye yezindlela ezilula eziyingoziangasebenzisa ukungena ku-database kufaka i-SQL Injection. Ukuphepha kwewebhusayithi yonke kuncike ezinyambeni ezitholakalayo ezingabamba ukweba.Kodwa-ke, kunezinye izindlela eziningi abantu abazisebenzisayo ukuthola amasayithi abo ephephile nabaqaphi.